Paska 2017: Niverina ny lazan’Antsirabe
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Paska 2017: Niverina ny lazan’Antsirabe
Tafaverina soa aman-tsara amin’ny lazany teo aloha rehetra ny fetin’ny Paska teto Antsirabe. Teo ampiandohana aloha dia tena mampisalasala be ny amin’ity taona ity satria nisy ny disadisa teo amin’ny mpitondra sy ny mpanohana ara-bola izay noheverina fa mbola tsy voavaha hatramin’izao angamba. Anisan’ ireny ny orinasa iray any an-toerana, Comadis, ireo mpanakanto izay raha tsaroantsika tsara dia efa namoaka teny fa tsy handray anjara intsony amin’ny paskan’Antsirabe. Nanomboka nisava anefa ny ahiahy rehefa nisy ny lanonana iray ny sabotsy ary niditra an-tsehatra ny Comadis nitondra ireo mpanakanto. Tsy eken’Antsirabe izany hoe Paska tsy misy lanonana izany. Nanomboka teo dia nihabetsaka ny olona avy eto Antsirabe sy ireo vahiny avy any amin’ny faritra. Lalana tsy nisy nandehanana sy fifamoivoizana mitohana manomboka hatreto. Mbola feno mpitsangantsangana ihany koa ny teny Andraikiba ny Alatsinainy. Na izany aza anefa dia nanao ny ainy tsy ho zavatra andro aman’alina ny mpitandro ny filaminana.
Raha tsorina izany dia nampiaiky volana ny filaminana. Mbola manana ny toerany Antsirabe fa vao mainka hahomby kokoa raha misy ny rafitra iray mpikarakara manokana ireo fety aman-danonana natao hoe “Syndicat d’initiative”. Atsipy amin’ny mpitondra ny Tanàna io soso-kevitra io ary mba ho hita sahady izany amin’ny Paka 2018.
Isan’ny heloka sazian’ny fehezan-dalàna famaizana ny fanitsakitsaham-bady, ary maro ny olona efa voaheloka momba izany, na teto amintsika na tany ampita tany, indrindra fa any amin’ny firenena tsy mankato ny fanambadiana afa-tsy iray.
Ny minisitra teo aloha nisahana ny filaminam-bahoaka, Anandra Norbert, ohatra, dia fantatra amin’ity anio ity izy sy ny sakaizavaviny no hatao fanadihadiana ary mety hiakatra eo anivon’ny fampanoavana. Notorian’ny vady ara-dalànan’i Anandra Norbert izy ireo, ka io resaka fanitsakitsahan-tokantrano io no fotony.